Ubuntu 14.04.5 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe mumazuva achangopfuura takaona kuburitswa kwakaita Ubuntu 16.04 kuruzhinji uyezve nekuvandudza kwayo kukuru, Canonical nehumwe Ubuntu havana kukanganwa dzimwe shanduro dzeUbuntu. Munguva pfupi yapfuura yakabuda yechishanu yekuvandudza yeTrusty Tahr, inonzi Ubuntu 14.04.5. Kana isu takanyora tikataura zvakanaka, Ubuntu 14.04.5.
Iyo LTS vhezheni yakabuda mu2014 ichiri kutsigirwa, rutsigiro runoshanda sezvarwunoonekwa parizvino kunyangwe isu tisingagamuchire shanduko huru kana nhau, vazhinji, kusanganisira timu yeUbuntu, inokurudzira kuvandudza yako yekushandisa system kune vhezheni 16.04.1 LTS.
Iyo itsva vhezheni yeUbuntu 14.04.5 inosanganisa iko kururamisa kwakawanda kwembichana, mabugs anga achionekwa mumwedzi iyi uye akaisa panjodzi kugadzikana kweshanduro. Usakanganwa kuti vhezheni yeLTS ine yakakwira nhanho yekugadzikana uye chengetedzo kupfuura zvakajairwa.
Ubuntu 14.04.5 inopa kugadzikana kunoratidzira vhezheni yeLTS
Dzimwe Hardware yakaverengerwa, saka kubva zvino zvichienda mberi, Ubuntu 14.04.5 ichave inowirirana nehurdware uye iine yakawanda Hardware, kunyangwe isu tiinewo shanduko mumadhiraivha epamhepo anotakurwa mu kernel 4.4 inoita Ubuntu 14.04.5 kuziva yakawanda Hardware kupfuura zvayakaita payakabuda muna 2014. Pfungwa yechitatu inoshanduka mune ino gadziriso imwe software yakaita kurodha kugovera zvinodiwa, kuchibvisa uye kugadzira kuti iko kugovera kuri kushomeka mukuisa. Nekudaro, isu hatifanire kuzvinyengedza pachedu, nekuti shanduko idiki uye hazvizoiti kuti Trusty Tahr ishande nemazvo izvozvi payakange isingaite, kunyangwe chiri chokwadi kuti ichashanda zvirinani kupfuura pakutanga.
Ini pachangu ndinogovana maonero eboka reUbuntu. Kana isu chaizvo tine timu ine mashoma zviwanikwa, Ubuntu 14.04.5 ine Lxde kana Xfce isarudzo huru, zvisinei kana tiine zviwanikwa zvakakwana, simudzira kuUbuntu 16.04.1 inofanirwa sezvo kugadzikana kwayo uye chengetedzo iri huru pasina kukanganwa iyo nyowani software iyo yainosanganisa Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 14.04.5 yave kuwanikwa
Hapana chinobuda, chete 14.04.4
Maxi Yakaoma akadaro
Kana ini ndichifanirwa kukwidziridzwa kusvika 16.04 asi chokwadi ndechekuti ndine nungo yekuisazve kana fomati hahahaha Kwaziso!
Pindura kuna Maxi A Secas
Ndakwidziridza komputa yangu kuUbuntu 16.04 LTS kubva mushanduro 14. Ikombuta ine makore mashoma Pentium IV 3.0 GHz 2 Gigs ye RAM. Zvakanditorera mazuva mashoma kuti ndizviwane asi zvaita. Uye inoenda yakasarudzika. Ndakafunga kuti mushure mezvose zvakashata zvandaifanira kuita, ini ndaizofanira fomati uye ndoita yakachena kumisikidza asi HAPANA
«... iyo yekuvandudza kuUbuntu 16.04.1 inosungirwa sezvo kugadzikana kwayo uye kuchengetedzeka kuri kukuru ...»
Kana kudzikama kana kuchengetedzeka kweUbuntu 16.04.1 hakuna kukura kupfuura kweUbuntu 14.04.5. Iyo 2014 LTS yakanyatsogadzikana (zvinotora makore ekutsigira, nepo iyo yazvino ichitora mwedzi) uye yakachengetedzeka se16.04.1, nekuti ese ari maviri anoshandisa iyo tsanga imwechete uye izvo zvikamu zvese zviri zviviri zvakaganhurwa zvakaenzana nguva dzese kutyora kwekuchengetedza.
Mazuva mashoma apfuura ndakafunga kuyedza 16.04.1 uye ichiri isina kugadzikana kana ichienzaniswa ne14.04.5, inokodzera ini zvakakwana.
Nyowani vhezheni yeTor inowanikwa